Meksika : Nampiharin’ny Teratany Otomis Ny Fizakantenany Ary Nofidian-dry Zareo Ny Solontenam-Pokonolony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Janoary 2016 5:03 GMT
Tahaka ny mponin'i Cherán, ao Michoacán, sy ny “caracoles” zapatista ao Chiapas, nampiasa ny fiandrianany ny fokonolona ñätho ao Huitzizilapan ary nifidy ny hanangana ny antenimieram-pokonolona. Sary: Más de 131.
Huitzizilapan, izay midika hoe “tanàna (ambanivohitra) lehibe” ny anaran'ny tanàna taloha N´dete, dia ahitana fokonolona teratany otomí-ñätho miisa 12 mifampizara amin'ny tanandehibe roa : Mexico sy Toluca. Herintaona izay ny mponina no nanomboka ny hetsika ho fiarovana ny ala, ary izany no nitarika azy ireo hifandamina sy hifidy ny solontenany, tsy misy idiran'ny politika, tamin'ny 7 desambra 2015.
Tamin'io andro io ny vazimba teratany niandro ora maromaro ny Mpampanoa ny Lalànan'ny Raharaha Fanajariana ny Tany, izay mampanakery ny fivoriana andraisana fanapahan-kevitra amin'ny tany iraisan'ny fokonolona ; saingy tsy tonga ranamana, nilaza fa tratran'ny lozam-pifamoivoizana. Nandeha tampoka tsy nisy fampilazana tsy nisy na inona na inona kosa ny mpikamban'ny Vaomieram-Pirenena Misahana ny Zon'Olombelona (CNDH) nampanantsoin'ny tantsaha comuneros (izay manajary ny tanin'ny fokonolona) handrakitra ny fivoriana.
Fa tsy nanakana ny vazimba teratany izany hampihatra ny zony araka ny Dina 169 an'ny Fikambanana Iraisampirenena Momba ny Asa (OIT), araka ny Lalampanorenana Meksikana ary ny Lalàm-Panajariana ny Tany. Eny tokoa, ny fivoriana, taorian'ny fifidianana tamin'ny tsanga-tanana, dia nifidy tsy nisy nanohitra ny “La Planilla del Pueblo”, lisitra natolotry ny tanàna ambanivohitra.
Na izany aza dia nanambara ireo Ñätho fa nisy fivoriam-pokonolona vaovao nampanaovin'ny Mpampanoa ny Lalànan'ny Raharaha Fanajariana ny Tany hotontosaina ny 18 janoary 2016 ary natahotra ry zareo fa hametraka fahefana hafa mirazotra amin'izay efa nofinidin-dry zareo ny fiadidiana ny tanàna sy ny antokon'ny fitondrana Antoko Revolisionera Mijoro (PRI). Nanapa-kevitra ry zareo noho izany ny handray anjara sy hanamafy ny latsabatony.
“Niomana izahay ary nametraka ny fitokisanay tamin'ny tantsaha comuneros rehetra mba hahazoana indray ny fandresena”, hoy i Abundio Rivera.
Tamin'ny fanambarana an-tsoratra nasiana ny datin'ny 12 janoary ny tantsaha no niampanga ny fomba fanaon'ireo manampahefana teo aloha tao amin'ny tanàna izay manana fifandraisana akaiky amin'ny PRI nizara roa arivo pesos meksikana isan'olona handresen-dahatra azy ireo tsy hanohana ny lisitra efa voafidy.
“Miasa amin'ny fanentanana izahay”, hoy ny navoitran'i Rivera.
Hatramin'ny 2003 ny governemanta federaly no nanao fanisana ny isan'ny tantsaha comuneros tao amin'ny ivom-panajariana ny tany sy ara-pokonolon'ny firenena. Ao Huitzizilapan dia misy tantsaha comuneros 904 izay mandray ny fanapahan-kevitra rehetra mifandraika amin'ny fizakana ny tany. Nanomboka tamin'izany no naneren'ireo manampahefana ara-piarahamonina nametrahana tetikasa isan-karazany tsy misy fakana ny hevitry ny mponina.
Ny fikasana amin'ny fananganana lisitra iray miainga amin'ny fivoriana misokatra ho an'ny rehetra sy ny hetsika nipoitra tao an-tanàna tamin'ny 2014, dia ny hiaro ny tontolo iainana sy ny tsy fisarasarahan'ny zaratanin'i Huitzizilapan. Taorian'ny fifidianana azy tamin'ny 7 desambra, dia toy izao ny teny voalohany nataon'ny solontena vaovao :
Fantatsika rehetra ny olana lehiben'ny ivom-pokonolona, tsy maintsy hiaro ny zaratanintsika izahay, ny ranontsika, ny alantsika ary hisahana ny olana hafa. Tsy maintsy ampidirintsika avokoa ny olom-pirenen'i San Lorenzo, na monine eto izy ireo na any an-kafa. Hosokafantsika ny lisitra ahafahan'izy ireo misoratra anarana.”
Nisy tantsaha iray aza lasa lavitra :
Hitolona aho hanokafana ny varavarana rehetra mankany amin'ny fizakantenan'ny tanàna. Tsy ny lisitra ihany no tsy maintsy sokafana, fa ny varavarana rehetra ao an-tanàna hahazoana indray ny fizakantena efa azontsika 15 taona lasa izay, satria manana ny holazainy ny tanora sy ny kilonga amin'ny resaka tany sy ala. Ary tsy ny Mpampanoa Lalànan'ny Fanajariana ny Tany intsony no mandray ny fanapahan-kevitra tokony ataontsika”.
Ny didy hitsivolan'ny filoha
Mitovy olana amin'i Xochicuautla sy i Ayotuxco i Huitzizilapan manoloana ny fananganana lalambe isosana haingana mampitohy an'i Toluca sy i Naucalpan, izay nomena hofain'ny orinasan'i Juan Armando Hinojosa, mpandraharaha iray nomena vahana indrindra nandritra ny fitondran'i Enrique Peña Nieto mandritra ny fotoana maharitra.
Nankatò ny lazaina ho “fanomezan-danja ny ala” tsy naka ny hevitry ny mponina ny solontenan'ny tanàna teo aloha sady mpikatroky ny PRI antsoina hoe Luis Enrique Dorantes.
Volaan vitsivitsy taty aoriana, ny marainan'ny 5 jolay, nandeha tany amin'ireo biraon'ny fokonolona ny tanoran'ny “Huitzi” ary namelona ny afon-dasy hanaraha-maso ny fivoriana izay nikasan'i Dorantes hanome ny ampahany amin'ny zaratanin'ny tanànan'ny monisipaliten'i Lerma amin'ny alalan'ny paika antsoina hoe“désincorporation” [famotsorana ny tany]. Ny marainan'io andro io dia naneno ny lakolosin'ny fiangonana akaikin'ny biraon'ny fokonolona. Olona an-jatony no namaly ny antso handroahana ireo polisy manakaiky ny arivo ao amin'ny tanànan-dry zareo.
Efa nivory niaraka tamin'ny fianakavian'ireo mpianatry ny sekoly fanofanana ho mpampianatra 43 nanjavona tao Ayotzinapa, tao amin'ny fanjakan'i Guerrero, sy ireo teratany rehetra nanerana ny firenena ny vehivavy sy ny tanora mbamin'ny kilongan'i Huitzizilapan tamin'io fotoana io. Ny tolon'izy ireo no nitondra azy ireo hanafoana any amin'ny fitsarana tampony ny didy hitsivolana navoakan'i Peña Nieto tamin'ny mey 2014 manaisotra amin'izy ireo ny taniny, hanangana ny gazetim-pokonolona ary handoko ny rindrin'izy ireo amin'ny hafatra hoe : “Comuneros avokoa izahay rehetra”, “Eto ny vahoaka no masi-mandidy”
Ala tian'ny maro
Ny ala arovan'i Xochicuautla sy i Huitzizilapan dia ao anatin'ny “Valan-Javaboary Otomí Mexica” izay mirefy 105 844 hekitara. Ireo ala ireo dia efa napetraky ny governemantam-panjakan'i Meksika ho tahirin-javaboary sy nomena voninahitra ho “Valan-Javaboary, Ara-Pizahantany, Fialamboly Zempoala La Buffa”.
Nikasa hanangana lalambe isosana haingana mirefy 39 km amin'io ala io i Peña Nieto sy ny governora Eruviel Ávila ka mety hampivaky tanteraka ho roa ny ala. Nanambara i Ávila tamin'ny desambra fa ho vita amin'ity taona 2016 ity ny tetikasa.
“Nahoana izahay no hiaro ny ala ?”, hoy ny fanontanian'ny solontena vaovaon'ny tanàna tamin'ny fotoana nifidianana azy tamin'ny 7 desambra. Ary izy ihany no namaly avy eo : “Satria io no havokavoky ny lemak'i Mexico sy Toluca ary manome rano kely anay io, tsy maintsy harovana io hitsinjovana ny taranaka ho avy ary tsy maintsy masahana ao an-tsaina izany”.